I-7499 - yeyiphi ikhowudi yesixeko? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
I-7499 - yeyiphi ikhowudi yesixeko?
Umbuzo, Yeyiphi ikhowudi yesixeko eyi-7499iqhelekile. Oku kungenxa yokungaqondakali kwenkqubo yokubhalwa kweenombolo zomnxeba.
I-Russia kudala itshintshela kwinkqubo yokufaka iikhowudi yenombolo yehlabathi, ngokokutsho, iinombolo zokuqala zekhowudi yomnxeba zibonisa ikhowudi yelizwe, emva koko kulandelwe ikhowudi yokuhlawula.
Ngoko ke, Ikhowudi ye-7499 Le ayisiyo ikhowudi yesixeko, kodwa iikhowudi ezimbini kunye. I-7 ibonisa ikhowudi yelizwe laseRussia, kunye nekhowudi 499 yikhowudi yesixeko saseMoscow.
I-7499 yikhowudi yedolophu enkulu yaseRussia (iMoscow). Okanye, endaweni yesixhenxe, yikhowudi yaseRussia, kodwa i-499 ikhowudi yaseMoscow.
Le khowudi entsha yaseMoscow, kunye nekhowudi yakudala (ikwasebenza) 495.
Ikhowudi entsha yaziswa ngenxa yokuba eMoscow amanani aqala amanani ama-495 aphela.
Ekuqaleni, abasemagunyeni eMoscow babefuna ngaloo ndlela ukwahlulahlula imali kule nxalenye ibe ziinxalenye ezimbini - emazantsi-ntshona kunye emantla-mpuma. Kodwa njengokuba ihlala isenzeka eRussia, yonke into ihamba ngendlela engathethekiyo kunye nokudideka kuqala ngezi khowudi.
Ngo-2013, nabo, iSebe Lezonxibelelwano kunye neMass Media zidibanise ezi khowudi zaseMoscow kunye nekhowudi yoMmandla waseMoscow 498. Ukutsala umnxeba ngaphakathi kwinethiwekhi akukho simahla, kuba ezi mnxeba zithathwa njengezasekhaya.
Ikhowudi yaseMoscow +7 499 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I-+7 499 yikhowudi yesibini yaseMoscow, emva kwekhowudi +7 495. Ezi khowudi zimbini zisetyenziswa eMoscow kuba bekungekho manani aneleyo kubo bonke abantu. Rhoqo ngenxa yalonto, abantu babhidaniswe yile khowudi. Ukuba ubizelwe kula manani, ke ngokuqinisekileyo le yindlela yohlobo oluthile (iBhanki, intengiso yento, njl njl).
Le khowudi enamanani amane yicap; 7499quot; Zililungu kwikomkhulu laseRussia iMoscow.
Oko kukuthi, ikhowudi ngokwayo yirenti enamanani amathathu; 499quot ;, kunye nenombolo ye-7, njengoko uyazi, ikhowudi yokuphuma yaseRussia. Iifowuni ngaphakathi kweRussia, endaweni yesixhenxe, sebenzisa ezisibhozo.
Nantsi i-quot; 495quot; - Yikhowudi endala yaseMoscow.
Inombolo yesi-7 kule khowudi ibhekisela kwikhowudi yeRussia yamazwe aphesheya (8 - kwifowuni yasekhaya). Kwaye ikhowudi 499 yeyaseMoscow. Ke ngoko, ukuba inani elingaqhelekanga elinamanani okuqala aboniswe kwifowuni, ke mhlawumbi eli liziko eliphakathi leziko elithile esisebenzisa iinkonzo.
Ewe yiMoscow, ikomkhulu laseRussia! +7 499
Rhoqo abantu basitsalela umnxeba bevela kwizixeko ezahlukeneyo kwaye asazi ukuba luvela phi ngqo olo fowuni kwaye sinasiphi isizathu basibiza. Ukuba ubizwe kwinombolo eqala ngamanani angama-7499, ke yazini ukuba ubizwe usuka kwikomkhulu lelizwe lethu.
Ukuba uthetha ngokuchanekileyo, ikhowudi iyavakala njalo; +7 499quot; nokuba icap; 8 499quot ;. Wonke umntu uyazi ukuba eli xabiso lekhowudi yikhowudi yefowuni yenkulu yelizwe lethu, oko kukuthi, iMoscow. Ukuba ufowuna ngaphandle kwaseMoscow, kufuneka uqale ucofe le khowudi, emva koko kuphela inombolo yefowuni ethile.
Le yenye yeekhowudi ezimbini zedolophu yaseMoscow. Kodwa iya kuchaneka nge-7499, kwaye +7499 -iyaboniswa xa ubiza usuka eMoscow uye kwinombolo yefowuni. Xa ucofa kwifowuni esecaleni komnxeba, sebenzisa ulandelelwano olulandelayo: 8 499 (inombolo yefowuni).
Ikhowudi yefowuni +7 499 yeyekomkhulu leRussia - iMoscow. Kodwa kuya kuchaneka ngakumbi ukuthi i-7 yikhowudi yelizwe, kwaye i-499 ikhowudi yesixeko. Ukutsala umnxeba eMoscow, kufuneka ucofe kuqala u -7 okanye u-8, emva koko ikhowudi yendawo ngu-499, emva koko inombolo yomrhumeli.
Le yikhowudi eMoscow entsha, ngaphambi kokuba ibingama-495 kuphela (mhlawumbi abaninzi bayakhumbula ukuba ngaphambili yayingu-095, kodwa oku malunga nexesha elidlulileyo). Kwangelo xesha, i-499 iyikhowudi yaseMoscow ngenene, kodwa isi-7 yikhowudi yelizwe lethu. Ungatsalela iinombolo ezi-8 endaweni yoko ukuba ufowuna eRussia.
Imibuzo ye-60 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,463.